साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से र कारोबार रकम दुवैमा सुधार देखिएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन सामान्य अंक मात्र बढेर बन्द भएको बजार यस दिन १७ दशमलव ४२ अंक बढेको छ । नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै बजार सकारात्मक भएका कारण लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ । यस दिन कारोबार सुरु भएसँगै नेप्से सामान्य ओरालो लागेको थियो । तर, कारोबारको आधा घन्टा अवधिपछि बजार बढ्न थालेको थियो ।
नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै सेमी अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको एक ब्रोकरले बताए । अहिले लगानीकर्ताले घरमै बसी सेयर खरिद–बिक्रीको आदेश दिन सक्ने भएका छन् । यसले आगामी दिनमा लागू हुने नेप्सेको अनलाइन प्रणालीलाई पनि मद्दत पुग्नेछ । केही लगानीकर्ता भने तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणको पर्खाइमा रहेका छन् । नाफामूलक वित्तीय विवरण सार्वजनिक भए बजारले सकारात्मक दिशा लिनेछ ।
‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन ३ दशमलव २८ अंक बढेर २ सय ७६ दशमलव २६ बिन्दुमा पुगेको छ । यस दिन १ सय ६७ कम्पनीको ६ हजार ८ सय ७ पटकको कारोबारमा रू. ५७ करोड ६८ लाख ६१ हजार ८ सय ६३ बराबरको ११ लाख ७८ हजार ७ सय ३८ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
यस दिनको कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ८८ प्रतिशत बढी हो । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ५६ दशमलव ६६ स्केलमा पुगेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिद–बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेर रू. १५ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ ।
सोमबार कारोबारमा आएको अन्य समूहको परिसूचकबाहेक अरू सबै समूहको परिसूचक बढेको छ । यस दिन लघुवित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक ४ दशलमव ८४ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, बिमा समूहको परिसूचक ४ दशमलव ७ प्रतिशत, होटेल समूहको २ दशमलव ७७ प्रतिशत, वित्त समूहको २ दशमलव २७ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको १ दशलमव १२ प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत, उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत र वाणिज्य बैंक समूहको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको अन्य समूहको परिसूचक भने यस दिन शून्य दशमलव १७ प्रतिशत घटेको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन प्रभु इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ । यस दिन सो बिमा कम्पनीको रू. २ करोड ८७ लाखभन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ । सेयर संख्याका आधारमा यस दिन कुमारी बैंक अगाडि रहेको छ भने कारोबार संख्याका आधारमा प्रिमियर इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ । कुमारीको यस दिन ६८ हजार ६ सय ३८ कित्ता र प्रिमियरको ४ सय ३१ पटक सेयर किनबेच भएको छ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य यस दिन १० प्रतिशत बढेको छ भने अन्य ५ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतकै हाराहारीमा बढेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयरको मूल्य यस दिन करिब १० प्रतिशत घटेको छ । यस दिन कारोबारमा आएको १ सय ६७ कम्पनीमध्ये १ सय २४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने २७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बाँकी १६ कम्पनीको सेयर मूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
ज्योतिको संस्थापक सेयर बिक्रीमा
ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले केही संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीका केही संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको संस्थापक सेयर बिक्री गर्न आवेदन दिएका कारण सो सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । सो सेयर खरिद गर्न आगामी ३५ दिनभित्र बैंकको संस्थापक सेयरधनीले केन्द्रीय कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नेपाल विटुमिनको साधारणसभा
नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडको वैशाख २५ गते द इम्बर्स रेस्टुरेन्ट, कृष्णगल्ली, पुल्चोकमा २७, २८ र २९औँ वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने भएको छ । सभामा वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने, लेखापरीक्षकको नियुक्ति र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूका तर्फबाट २ जना सञ्चालक निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।
प्रभुको हकप्रद बाँडफाँड
प्रभु बैंक लिमिटेडले चैत २३ गते हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरेको छ । बैंकले पुस २० गतेसम्म कायम सेयरधनीहरूका लागि १० बराबर ४ अनुपातमा निष्कासन गरेको हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरेको हो । बैंकले निष्कासन गरेको २ करोड ३५ लाख २५ हजार ६ सय ८ कित्तामध्ये २ करोड ११ लाख ९९ हजार ३ सय २१ कित्ता बाँडफाँड गरेको हो । बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सन्राइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
सहाराको बुक क्लोज
सहारा विकास बैंक लिमिटेडले वैशाख १० गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । बैंकले १ बराबर २ दशमलव ५० अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि सो दिन बुक क्लोज गर्न लागेको हो । बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । पुस २९ गते सम्पन्न बैंकको छैटौँ वार्षिक साधारणसभाले सो हकप्रद सेयरको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
इकाई र ऋणपत्र सूचीकृत
सोमबार सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड र एनआइसी एसिया ग्रोथ फन्डले इकाइ सूचीकृत गरेको छ । यस दिन सिटिजन्सले ८ करोड २० लाख इकाइ र एनआइसी एसियाले ८ करोड ३५ लाख २० हजार कित्ता इकाइ सूचीकृत गरेको हो । यसका साथै यस दिन ३० लाख कित्ता ९ प्रतिशत एनआइसी एसिया डिबेन्चर २०८१/८२ पनि सूचीकृत भएको छ ।
युनाइटेडको हकप्रद सेयर
युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १० बराबर २४ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नका लागि सो हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो । वैशाख २ गते सम्पन्न कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो । आगामी वार्षिक साधारणसभा र बिमा समितिबाट पारित भएपश्चात् सो हकप्रद सेयर निष्कासन गरिनेछ ।